ဘာလို့လေယာဉ်ထိုင်ခုံတွေ အားလုံးနီးပါးက အပြာရောင်ဖြစ်နေရတာလဲ ? | XYZ NEWS
ဘာလို့လေယာဉ်ထိုင်ခုံတွေ အားလုံးနီးပါးက အပြာရောင်ဖြစ်နေရတာလဲ ?
September 12, 2019 By Admin knowledge, unusual
လေယာဉ်လိုင်းတွေအားလုံးရဲ့ထိုင်ခုံအရောင်ကိုသင်သတိထားမိပါသလား? အမြဲတမ်းနီးပါးအပြာရောင်ဖြစ်နေတတ်ပီး သူနဲ့ပတ်သတ်လို့ခြွင်းချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ အချို့လူတွေကတော့ ဒီအရောင်ဖြစ်နေရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးကြီးကအပြာရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးချင်လို့လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါမဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကအဲ့လောက်မရိုးရှင်းပါဘူး။
ပထမဆုံးသောအပြာရောင်ထိုင်ခုံတွေဟာ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိခဲ့တာဖြစ်ပီး အခုဆိုရင်လဲ လေကြောင်းလိုင်းအားလုံးနီးပါးဟာ အဲ့အရောင်ကိုပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအရဆိုရင်တော့ လူအတော်များများဟာ အပြာရောင်ကို ယုံကြည်ရမှုစိတ်ချရမှု၊ ဘေးကင်းရမှု စတာတွေနဲ့တွဲလျက်မြင်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။ အဲ့အပြင် သုတေသနပြုလုပ်ချက်တွေအရ ၉၀% သောလူတွေဟာ Brand color တွေပေါ်မူတည်ပီး ကုမ္ပဏီရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါတယ်။
အခုလိုအပြာရောင်ရွေးချယ်ရခြင်းရဲ့ နောက်ထပ်လက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အပေအတေခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တော်ရုံညစ်ပတ်နေတာမျိုးဆိုလဲ ဒီအရောင်ပေါ်မှာဆိုရင် သိပ်ပီးမသိသာပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအရောင်ကိုဆိုရင် အခြားအရောင်ဖျော့တွေထက်ပိုပီးကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပိတ်သား ဒါမှမဟုတ် လယ်သာ
နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဝေးလံတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေဆိုရင် လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့ ပိတ်သားထိုင်ခုံကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပိတ်သားဟာချောင်ချောင်ချိချိရှိပီး လူတွေကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေကာ အသက်ရှူချောင်စေပါတယ်။
ဒါမဲ့လယ်သာထိုင်ခုံကိုတော့ တိုတောင်းတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ လယ်သာဟာအင်မတန်ကိုအကြမ်းခံပီးတော့ အချိုရည်တွေဘာတွေဖိတ်ရင်တောင်အစွန်းမထင်ကျန်ခဲ့ပါဘူး။
သင်ပြတင်းပေါက်နားတော့ထိုင်ပီး ပြတင်းပေါက်ကနေ ဘာမှမမြင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံဖူးပါသလား? ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ လေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ တတ်နိုင်သလောက် လေယာဉ်ထဲမှာထိုင်ခုံတွေများများဆန့်အောင်လုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံအတန်းတွေကိုဘယ်လိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ထည့်မလဲဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေရှိပေမဲ့ ဘယ်သူမှမလိုက်နာကြပါဘူး။
Writer -Min Thu ( XYZ News)
သင့်ရဲ ့အသက်အန္တရာယ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အတွက် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအသောက် ( ၇ )မျိုး
ဂျပန်ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီထက် ၇ နှစ်စောပြီး စက်ရုပ်တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးဦးကြည်
အမေရိကန်နဲ့ စစ်ပွဲမှာ အဓိကကျမယ့် မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ မြေအောက် လေတပ်စစ်စခန်း
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ပါဝါဖြန့်ကြက်နိုင်ရေး အီရတ်မှာ လျှို့ဝှက် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်လက်နက်သိုက် အီရန် တည်ဆောက်နေ
ဆက်စီ အကျဆုံး streamer ann mateo ရဲ့ အလှပုုံများ
ကမ္ဘာ့ ဆက်စီ အကျဆုံးလို့အမည်ပေးထားခြင်းခံထားရတဲ့ ထိုင်ဝမ် နာမ်စ့်မလေးအလှပုုံများ
ရင်သားပြပြီး Game Stream လုုပ်လိုု့ နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖိအားပေးခြင်းခံနေရတဲ့ အင်ဒို မလေး
ချမ်းသာလွန်းတဲ့ တရုတ်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အတိုးနည်း ချေးငွေနဲ့ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံ‌ကျော် ထုတ်ချေး၍ အမေရိကန် မကျေမချမ်းဖြစ်
ကျားဖောင်ရေလုပ်ငန်းတွင် လူကုန်ကူးမှုဖြင့် လူ ၁၈ ဦးကို အမှုဖွင့်အရေးယူ
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများ စီးလာသည့်လှေမြုပ်၊ ၅၈ ဦး သေဆုံး
ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်ရယူခဲ့သည့် ရုရှားဆိုက်ဘာရာဇဝတ်ဂိုဏ်း ဖြိုခွင်းခံရ
ရတနာဆိုင်လုယက်သူများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်၊၂ ဦး သေဆုံး
© XYZ NEWS 2019 XYZ NEWS2019 • Themaga powered by WordPress